मान्छे कसरी बिग्रन्छ , अर्थात कम्युनिस्ट हुन्छ ! – Halkhabar kura
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०३:४३
मान्छे कसरी बिग्रन्छ , अर्थात कम्युनिस्ट हुन्छ !
सन्तोष चिमरिया – हातमा गोबर लिएर एउटा किशोर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिन्छ । सुरुमा उसले गोबरले पर्चा टाँस्छ । अनि घरकाम, खेतकाम , स्कुल सबै त्यागेर गोबर हातमा लिन्छ र क्रान्ति गर्न निस्किन्छ ।
जब सत्ताको हरियो घाँस निकट आउँछ, उसका निम्ति गोबर गोब्र्याइ रहेको साँडे कम्युनिस्ट, गाई र बाछाबाछी लिएर सत्ताको घाँस चर्न सिंहदरबार छिर्छ । हातमा गोबर लिएको गोब्रे कम्युनिस्ट, अयोग्य छापामारको प्रमाणपत्र छातीमा झुन्ड्याएर, खुट्टो खोच्याउदै क्रान्तिबाट फिर्ता हुन्छ । अनि आफैले आगो लगाएको जिल्ला प्रशासनबाट पासपोर्ट लिन , आफू जस्तै ” अयोग्य गुरिल्लाहरुको “लाईनमा लाग्न सदरमुकाम झर्छ । अनि क्रान्तिको बाँकी कार्यभार अरब र मलेसियामा गएर पूरा गर्छ ।
Previous नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय गुटसँग संयुक्त आन्दोलन गर्दैनौंः विश्वप्रकाश शर्मा (भिडियो)